Abaphathiswa be-intanethi - Yintoni esinokuyilindela xa usityelele
Yintoni esinokuyilindela xa usityelele
Yiloo nto onokuyilindela xa usityelele.
Umthandazo: Ngexesha lokunquba inkonzo eninzi yamadoda iya kubakhokela ebandleni kwimithandazo yomphakathi.
IZenzo 2: 42 "Baqhubeka begxininisa kwimfundiso yabapostile kunye nobudlelane, ekuqhekekeni kwesonka, nasemithandazweni.
Ukucula: Siza kucula iingoma eziliqela kunye neengoma kunye, zikhokelwa ngumbhali omnye okanye ngaphezulu. Ezi ziya kuhlaziywa i-capella (ngaphandle kokuhambelana kwezixhobo zomculo). Siyicula ngale ndlela kuba ilandele umzekelo wenkonzo yokuqala yecawa kwaye le yimihlobo kuphela yomculo ogunyazisiweyo kwiTestamente eNtsha yonqulo.
E-Efese 5: 19 "bethetha omnye komnye ngeendumiso kunye neengoma kunye neengoma zokomoya, kucula nokubethelela entliziyweni yakho eNkosini,"
ISidlo seNkosi: Sidla iSidlo seNkosi nganye ngeCawa, silandela iphethini yecawa yokuqala yenkulungwane.
IZenzo 20: 7 "Ngomhla wokuqala weveki, xa abafundi behlanganisene ukuphuka isonka, uPawulos, ulungele ukuhamba ngengomso, wathetha nabo waza waqhubeka nesigijimi sakhe kwada phakathi kobusuku."
Xa sisidla iSidlo seNkosi siyakhumbula ukufa kweNkosi ade abuye kwakhona.
1X Korinte 11: 23-26 Kuba ndifumene eNkosini into endikunikele yona: ukuba iNkosi uYesu ngobusuku obuye wangcatshulwa wathabatha isonka, kwaye ekubongeni, wayiqhekeza yathi, "Thatha, udle; Lo ngumzimba wam ophukile kuwe; Yenza oku kukukhunjuzwa kwam. "Ngendlela efanayo Wathabatha indebe emva kwesidlo, esithi, 'Le ndebe ngumnqophiso omtsha egazini lam. Yenzani njalo, ngokusoloko niyisela, ukukhunjulwa kwam. "Kuba njalo xa nidla esi sinka niphuze le ndebe, niyaxela ukufa kweNkosi ade afike.
Ukunika: Sinika umrhumo womsebenzi wecawa ngamnye ngosuku lokuqala lweveki, siqaphela ukuba uThixo uye wasibusisa ngokuthe tye ngamnye wethu. Icawa ixhasa imisebenzi emininzi efuna inkxaso yemali.
I-1st Korinte 16: 2 "Ngosuku lokuqala lweveki ngamnye makabeke into ethile eceleni, ugcine njengoko enokuphumelela, ukuba kungabikho iqoqo xa ndiza."
Isifundo seBhayibhile: Senza isifundo seBhayibhile, ngokuyinhloko ngokushumayela kweLizwi, kodwa nangokufunda iBhayibhile nokufundisa ngokuthe ngqo.
2nd Timothy 4: 1-2 "Ndiya kukugweba ngoko phambi kukaThixo neNkosi uYesu Kristu, oya kubagweba abaphilayo nabafileyo ekubonakaleni kwakhe nobukumkani bakhe: shumayela ilizwi! Yilungele ngexesha kunye nangaphandle kwexesha. khalima, ukhuthaze, ngokunyamezela nokufundisa. "
Ekupheleni kwentshumayelo, isimemo siya kwandiswa kuye nawuphi na ofuna ukuphendula. Ukuze ufunde kabanzi malunga nobuKristu, ukuba ngumKristu okanye ukucela imithandazo yecawa, nceda wenze imfuno yakho yaziwe.
Inkonzo yethu yonqulo ibhekwa njengendabuko kwiicawa zikaKristu. Akusiyo ngexesha elifanelekileyo okanye elisebenzayo. Sizama ukukhonza uThixo ngoMoya nangeNyaniso.
UJohn 4: 24 "UThixo unguMoya, kwaye abo bamnqulayo kufuneka bakhuleke ngomoya nangenyaniso."